Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Bahamas » Inona no vaovao any The Bahamas amin'ny volana septambra
Vaovao Mafana Bahamas • Vaovao Mafana • Karaiba • Hospitality Industry • Vaovao • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Vaovao isan-karazany
Mandosira mankany amin'ny rano turquoise an'ny Bahamas hizaha ny fitokana-nosy farany ary gaga amin'ny zava-mahatalanjona voajanahary eto ambonin'ny tany. Miaraka amin'ny fitsangatsanganana fitadiavana traikefa vaovao, kojakoja nohavaozina ary fifanarahana mafana, ireo mpitsangatsangana mitady hamandrika ny fialan-tsasatra manaraka ho an'ny traikefa tsy hay hadinoina.
Nambara ny lisitry ny niainany mahafinaritra any The Bahamas, ary mahagaga izany.
Alaivo an-tsaina hoe any ianao rehefa miverina any Albany i Tiger Woods amin'ny 2021 Hero World Challenge.
Na miarahaba ireo mpanjono miverina ao amin'ny State-of-the-Art Superyacht Friendly Marine Opens in Walker's Cay. Andraso fa mbola misy…
UNEXSO dia manambara traikefa vaovao momba ny sambo ambany ambany ho an'ny Shark Junction - Ireo mpitsangatsangana sy mahaliana indrindra dia afaka mankafy ny dia an-tsambo farany avy any Port Lucaya, ny Sambo Glass Bottom mankany Shark Junction Tour, miaraka amina fijanonana mientana telo ao anatin'izany ny "Shark Junction" malaza eran-tany, fonenan'ireo karazan-dranomasina Karaiba Reef Shark, antsantsa mpitsabo mpanampy ary tohotra goavambe.
Niverina tany Albany i Tiger Woods noho ny fanamby eran-tany tamin'ny 2021 - Tiger Woods, tompona golfer fanta-daza eran'izao tontolo izao, ary miomana handray ny 2021 Fanamby eran-tany mahery fo ao Albany, The Bahamas manomboka ny Alatsinainy 29 Novambra - 5 Desambra 2021, hanohanana ny fanabeazana ny tanora manerantany.
Misokatra ao amin'ny Walker's Cay, Abacos Avaratra i Marina, mpinamana amin'ny superyacht malaza - Ny tompona Carl sy Gigi Allen dia miarahaba ireo mpanjono tafaverina eto an-drenivohitra sambo The Bahamas amin'ny fisokafan'ny Walker's Cay. Ilay marina vao nitarina dia afaka mandray superyachts ary mikasa ny hanampy fitaovana fanampiny ao anatin'izany ny pisinina, spa ary bungalow.
Tropic Ocean Airways dia mandefa serivisy Airlift avy any Great Harbor Cay - Manomboka amin'ny 2 septambra, Tropic Ocean Airways manampy safidy sidina voatendry mankany Great Harbor Cay, any amin'ny Nosy Berry. Ny Floridians dia afaka manoratra serivisy tsy misy fihenjanana avy any Fort Lauderdale ka hatrany Nassau, Bimini ary The Berry Islands.
Ny Bahamas notendrena tamin'ny “Toerana filokana tsara indrindra any Karaiba 2021” - Ny nosy Bahamas dia notendrena handray anjara amin'ny World Casino Awards. Ny mpandeha dia afaka mandatsa-bato maimaim-poana amin'ny Internet izao manomboka amin'ny 15 Oktobra 2021.
PROMOSY SY Tolotra
Raha mila lisitra feno momba ny fifampiraharahana sy fonosana ho an'ny The Bahamas, tsidiho www.bahamas.com/deals-packages .
Makà fisotroana ary mijanona mandritra ny fotoana fohy ao amin'ny Margaritaville Beach Resort - Rehefa mijanona 14 andro na mihoatra ao Margaritaville Beach Resort, ny vahiny dia mahazo vidiny manokana hatramin'ny 40% amin'ny taha mahazatra. Ny varavarankely dia izao hatramin'ny 31 desambra 2021 izao.
$ 150 Fandoavam-bola ho an'ny mpanao fialan-tsasatra any ivelany - Ny mpanamory fiaramanidina manokana dia mahazo tapakila $ 150 ho an'ny trano fandraisam-bahiny roa alina talohan'ny famandrihana isaky ny mandray anjara Ny nosy Bahama Out Fananan'ny mpikambana ao amin'ny Birao fampiroboroboana alohan'ny 31 Oktobra 2021.
Miaraka amin'ny nosy sy cay maherin'ny 700 ary toerana itodiana 16 tsy manam-paharoa, i Bahamas dia 50 kilaometatra monja miala ny morontsirak'i Florida, izay manome sidina mora manidina izay mitondra ny mpandeha lavitra ny andavan'andro. Ny nosy Bahamas dia manana jono, antsitrika, sambo an-tsambo, fanaovana vorona, ary karazan-javaboary manerantany, kilometatra an'arivony maro amin'ny rano mahavariana indrindra eto an-tany sy ny morontsiraka madio miandry ny fianakaviana, mpivady ary mpitsangatsangana. Jereo ny nosy rehetra tsy maintsy manolotra amin'ny www.bahamas.com na ao amin'ny Facebook, YouTube or Instagram hahitanao hoe maninona no Tsara kokoa any The Bahamas.
Toerana tanàn-dehibe manerantany tsara indrindra ho an'i Etazonia...